Na mgbakwunye na-ajụ ha ajụjụ na ọzọ eke ugboro na na ọzọ eke Ọnọdụ, ọhụrụ technology na-enye ohere ka anyị na-agbanwe ụdị nke ajụjụ. Kasị nnyocha e mere ajụjụ na-emechi, ebe zaghachirinụ ịhọrọ site na a set nhọrọ dere na-eme nnyocha. Ọ bụ a usoro na otu onye a ma ama e mere na-eme nchọpụta oku "-etinye okwu ndị mmadụ ọnụ." Dị ka ihe atụ, ebe a bụ a mechiri emechi nnyocha e mere ajụjụ bụ:
"Nke a na-esote ajụjụ bụ na isiokwu nke ọrụ. Biko lee anya na nke a na kaadị na-agwa m nke ihe on a ndepụta na ị ga-kacha amasị na ọrụ? "
Ọ dịghị ize ndụ nke ịbụ chụọ n'ọrụ;
Arụ ọrụ ọtụtụ awa nwere obere, nza nke free oge;
Ohere maka ọganihu;
The ọrụ dị mkpa, na-enye a ojuju.
Ugbu a ebe a bụ otu ajụjụ ahụ a jụrụ na-emeghe ụdị:
Ọ bụ ezie na ajụjụ abụọ a na-egosi nnọọ yiri, a nnyocha e mere nnwale site Howard Schuman na Stanley Presser (1979) kpughere na ha nwere ike na-emepụta dị nnọọ iche na ya pụta: ihe fọrọ nke nta 60% nke na-emeghe pụta ada ná mpụga nke na edemede ahụ e mechiri emechi Ibọrọ (ọgụgụ 3.7).
Ọgụgụ 3.7: Results si Schuman and Presser (1979) . Ibọrọ bụ nnọọ iche dabere ma ajụjụ na-jụrụ ke mechiri emechi ma ọ bụ na-emeghe ụdị.
Ọ bụ ezie na na-emeghe ma na-emechi ajụjụ pụrụ ịba nnọọ iche ọmụma na abụọ bụ ndị na-ewu ewu na mmalite nke nnyocha e mere nnyocha, emechi ajụjụ na-achị ala ahụ. Nke a na-achị adịghị n'ihi mechiri emechi ajụjụ e nwapụtaworo na-enye mma mmesho, kama ọ bụ n'ihi na ha bụ nnọọ mfe iji; na usoro nke nzuzo open-biri ajụjụ bụ mgbagwoju anya na ọnụ. The pụọ emeghe ajụjụ bụ nzukọ n'ihi na ọ bụ kpomkwem ozi na-eme nchọpụta amaghị n'ihu nke oge na ike kacha oké ọnụ ahịa.
Na ụfọdụ nnyocha na emewo m na Karen chepụtara echiche, anyị gbalịrị ike ọhụrụ ụdị nnyocha e mere ajụjụ na-agwakọta kasị mma atụmatụ nke ma-emeghe ma na-emechi ajụjụ (Salganik and Levy 2015) . Ya bụ, ọ na-enyere ndị nnyocha na-amụta ọhụrụ ozi dị ka na-emeghe ajụjụ ahụ, ma ọ na-amịrị mfe iji nyochaa data dị ka a mechiri emechi ajụjụ. Mmụọ nsọ site online usoro chụpụrụ site ọrụ-eme ọdịnaya, nke Wikipedia bụ Onye Nlereanya anyị na-akpọ anyị usoro a Wiki nnyocha e mere. Site combing agwa nke Wikipedia na a omenala nnyocha e mere, anyị na-atụ ike a ụzọ ọhụrụ nke ajụ ha ajụjụ.
The data collection usoro na a Wiki nnyocha e mere na-egosi na a ngo anyị mere na New York City Mayor si Office iji iwekota bi 'echiche n'ime PlaNYC 2030, New York si citywide nkwado plan. Iji malite usoro, na Mayor si Office eme a ndepụta nke 25 echiche dabere na ha aga na outreach (eg, "-achọ n'Aka niile nnukwu ụlọ na-eme ka ụfọdụ ume arụmọrụ upgrades," "Na-akụzi ụmụaka banyere green okwu dị ka akụkụ nke usoro ọmụmụ ụlọ akwụkwọ"). Eji ihe ndị a 25 echiche dị ka "osisi," ndị Mayor si Office jụrụ ajụjụ "Olee nke i chere bụ a mma echiche maka eke a greener, ukwuu New York City?" Zaghachirinụ na-adade na a ụzọ echiche (eg, "Open schoolyards gafee obodo ahụ dị ka ọha playgrounds "na" Mmụba ezubere iche osisi plantings na agbata na elu ụkwara ume ọkụ udu "), ma jụọ ya ịhọrọ ha (ọgụgụ 3,8). Mgbe ị na-ahọrọ, zaghachirinụ na-ozugbo ọkọnọ ọzọ enweghị usoro họrọ ụzọ echiche. Zaghachirinụ nwere ike ịnọgide inye onyinye ọmụma banyere ha mmasị ogologo oge ka ha chọrọ site ma ịtụ vootu ma ọ bụ ị na-ahọrọ "m ike ikpebi." Crucially, mgbe ọ bụla mgbe, zaghachirinụ na-enwe ike eme echiche nke onwe ha, nke-rue mgbe ihu ọma site Mayor si Office-ghọrọ akụkụ nke ọdọ mmiri nke echiche ga-ọnọde ndị ọzọ. N'ihi ya, ajụjụ na sonyere na-enweta bụ ma na-emeghe ma na-emechi n'out oge.
Ọgụgụ 3.8: Interface maka a Wiki nnyocha e mere (Salganik and Levy 2015) .
The Mayor si Office ulo oru ya Wiki nnyocha e mere na October 2010 na njikọ na usoro nke nzukọ obodo iji nweta bi nzaghachi. N'ime dị ka ọnwa anọ, 1.436 ndị zaghachirinụ so mee 31.893 Ibọrọ na 464 echiche ọhụrụ. Critically, 8 nke top 10 isi echiche e uploaded site sonyere kama nke set nke nkpuru echiche site Mayor si Office. Na, dị ka anyị na-akọwa na anyị akwụkwọ, nke a bụ a ụkpụrụ na ọtụtụ UK nyocha. Ya bu, site n'ịbụ emeghe ka ọhụrụ ọmụma, na-eme nnyocha na-enwe ike ịmụta ihe ga-e Agbaghara site na iji ihe mechiri emechi bịara ibi nwatakịrị na-arịọ.